Mụta maka Sun na Jonathon Shwartz na oke a Ajụjụ ọnụ | Martech Zone
Mụta maka Sun na Jonathon Shwartz na oke a Ajụjụ ọnụ
Saturday, January 20, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu afọ na ọkara gara aga M mere na-anọdụ n'ofe tebụl si Jonathon Schwartz na nke mbụ Ogige Mashup na n'ezie amaghị onye ọ bụ.
CMO m, Chris Baggott, rụtụrụ m aka wee nọdụ ala ma lelee ya anya ka CNET gbara ya ajụjụ ọnụ maka ihe dị ka nkeji iri abụọ. M masịrị ozugbo. Ihe mbu o mere bu iwepu mkpuru iwe ma gwa ndi edere ede banyere ihe ederede CNET edere na otu esi eme ya Sun a ghaara ya ụgha. Ọ nọ n'ihu ha n'ụzọ obi ọjọọ na-esepụghị aka. Ahụla m ka ọtụtụ ndị isi na-ahụ maka ndị nta akụkọ, yabụ na ọ dị mma ikiri.
Na nke a ScobleShow nọdụ ala Robert Scoble, Jonathon na-ekwu maka Sun, Java, iPhone, Mircrosoft na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ na-adịbeghị anya. Ọ bụ enyi na enyi, mara ihe na incredibly emeghe.
Otu n'ime okwu dị ukwuu ebe a bụ na Sun na-egosi ihe ịga nke ọma bụ n'ezie ọ theụ nke ndị ọrụ ha. Jonathon na-anya isi na 'boomerangs'… ya bụ, ndị ọrụ Sun hapụrụ ma na-alaghachi ụlọ ọrụ ugbu a. Ọ na-agwakwa ọtụtụ ndị na-ekwuhie okwu banyere Sun dịka ọnụahịa ntinye na ikike. You maara Sun na-etinye $ 2 ijeri na nyocha na mmepe kwa afọ? Ma ọ bụ na Java bụ akara ngosi nka eji amara ebe niile?
Dị ka 'Microsoft toro' ọkà na ụzụ techno na-arụ ọrụ mgbe niile maka nnukwu ụlọ ọrụ wuru na netwọk na sava Microsoft, echere m na naanị nzaghachi m na Jonathon na Sun bụ na amaghị m ha nke ọma. Anọ m na Indiana… ọ bụghị na Silicon Valley. Agaghị m aga ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe. Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepe na-eme ọsọ ọsọ nke dị na egwu ụgbọ oloko nke Microsoft ma agaghị apụ n'oge ọ bụla… ma ọ bụrụ na nke ahụ ga-ekwe omume. Onwe m, ahụrụ m ya n'anya LAMP ma ahụmịhe m na ha bụ naanị ihe m mere n'onwe m na Bochum, mmepe, WordPress, na MAMP. Mụ na ndị ọrụ weebụ Java na-arụ ọrụ afọ ole na ole gara aga ma ọ rụọ ọrụ nke ọma, mana anyị etinyereghị n'ihi na anyị nwekwara ike mejuputa ọrụ weebụ yana teknụzụ Microsoft - na etinyere ngwa anyị.
Nkwupụta sitere n'aka onye nrụpụta na saịtị Jonathon na-ekwu ihe yiri nke a… ọ gaghị enwe ike ịnwale Solaris n'ihi na ọ bụghị nhọrọ maka ya ịmalite 'igwu egwu' n'ụlọ.
Nke a bụ echiche nnukwu ntutu m siri ike maka Sun. Echere m na nke a na nkwanye ùgwù zuru oke, gịnị ma ị tinye ego ha ebe ọnụ ha dị ma jiri ọnụ na-emeghe ma na-agakwuru ndị ahịa Microsoft ụlọ ọrụ na ịhazigharị ngwa ha na Java na Solaris. Ọ bụ naanị abụghị nhọrọ maka anyị ịchọ ebe ọzọ maka ihe ngwọta… ọbụlagodi na ego echekwara na njedebe nke okporo ụzọ, anyị enweghị oge iji kwaga n'okporo ụzọ ahụ.
Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ngwa anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ka ọ dịkwuo mfe, ego anyị nwere ike belata, na ọrụ nwere ike ịbawanye na Sun. Ma olee otu anyị ga - esi mee njem ahụ na - enweghị nkwarụ ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ igbu oge mmepe dị mkpa iji merie n'ahịa anyị? Anyị nwere ndị ahịa 5,000, ndị ọrụ 15,000 na ọtụtụ ijeri azụmahịa kwa ọnwa ọ bụla. Ndi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme ntụgharị ndị ahụ? Jonathon, oge ọzọ ị na Indianapolis… Ọ ga-amasị m iri nri ehihie ma kpọga gị na njem nke ụlọ ọrụ anyị.
Ihe ikpeazụ ederede… Jonathon na-ekwukwa banyere ahụmahụ ọnwụ na-eru nso nke gbanwere ndụ ya. Obi dị m ụtọ na ahụbeghị m nke ahụ - mana inwe ụmụ enweela mmetụta yiri nke ahụ. Ọzọkwa… vidiyo vidiyo na-egbutu na njedebe?
Azụmaahịa nke ara
Daalụ maka ụdị kwuru. Vidio ahụ gbanwere na njedebe. Teepu ahụ nwere nnukwu ọdịda ebe ahụ ka ị ghara ịhapụ sekọnd ole na ole na ụdị "ekele, goodbye". Ndo maka nke ahụ. N'ime ihe gbara ajụjụ ọnụ 800 m mere nke ahụ bụ naanị oge nke atọ nke ọdịda teepu mebiri ihe.
Chaị - ekele maka nleta na ikwu Robert! Ọ bụ mkparịta ụka dị egwu nke meghere anya m na Sun.